Tselatra · Jona, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Jona, 2008
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Jona, 2008
Kenya : Fanampim-baovao avy ami'ny fanampiana olona amin'ny aterineto
Kenyà 16 Jona 2008
Fanampim-baovao avy amin'ny mpiasa an-tsitra-po ao amin'ny AVIF any Kenya : Vaovao tapatapany avy aty amin'ny Mercy Home hampahafantarana anareo mikasika ny fitsidihana ataonay, ary mba hanehoana fa nanampy sy nanatsara ny fiainan'ireo vehivavy ato amin'ny Mercy Home ny vola fanampiana natolotrareo.
Afrika: Tonga ankehitriny ny e-fitondrana
Kenyà 06 Jona 2008
David Kobia no miady hevitra momba ny e-fitondrana (e-governance) any Afrika: “Heveriko ankehitriny fa azo atao amin'izay ny misaotra ampahibemaso ny mpanao politika any amin'ny tany Afrikana ampahibemaso noho ny nampandamoka ny fampiroboroboana ny serasera an-tarobia(telefôna tsy mihetsika), ka nahatonga ny fanombanana fa hitombo 22% ny mpanjifa amin'ny finday. hahatratra...
Shina 06 Jona 2008
Asehon'ny CCTV (izay marihina fa mandeha amin'ny TVM rehefa vita ny fandaharana tontosain'ny tvm amin'ny alina ka mandra-panombohan'ny fandaharana amin'ny maraina indray)amin'izao tontolo izao ny lahatsary ahitana ny fisaoran'ny traboina izay nataon'ny governemanta. Guo yu hua, mpahay momba ny olombelona kosa milaza fa ny governemanta no tokony hisaotra ny vahoaka...
Oganda : Famoretana ny fanaovan-gazety
Oganda 11 Jona 2008
Hoy i Moses Paul, miresaka ny famoretana ny mpanao gazety ao Oganda : “Nametraka rafitra vaovao ny governemanta ka mampiseho fomba iray indray hamehezan'ny fanjakana ny fampahalalam-baovao. Tsy vao voalohany io amin'ny fomba tsy manaraka ny lalam-panorenana ataon'ireo manam-pahefana ao amin'ny governemantan'ny Filoha Museveni mba hanafoana ireo fampahalalam-baovaovao tsy miankina...
Myanmar (Birmania) 06 Jona 2008
Nanangana bolongana, 8-8-08 for Burma, ireo menavazan'ny tolona any Myanmar hanerena an'i Shina “ampinga tokana” ampelatanan'ny mpitondra jadona any Myanmar an-toerana mba hamonjena ain'olona sy hananganana ny fahafahana any an-toerana.
Amerika Latina 06 Jona 2008
Uncommon Sense no namaham-bolongana momba ny fitadiavana hanapenam-bava ny fihetsiketsehan'ny voafonja kendren'ny mpiambina ny fonja any Combindado de Guantánamo “izay niandoha raha nilofo hampahafantatra ny fihoaram-pefy mitranga any am-ponja tamina mpitolona ho amin'ny zon'olombelona ny gadra politika iray.”
Armenia 02 Jona 2008
Nolazain’i Unzipped (tsy voafintina) fa somary nihilana ho amin’ny lafiny politika kokoa tamin’ity taona ity ny fanamarihana manerantany ny andron’ny ankizy, isaky ny voalohan’ny volana jona, nomarihan'ny fianakavian’ireo mpanohitra notazonina am-ponja omaly (voalohany volana jona)tamin’ny alalan’ny fihetsiketsehana nataony teo akaikin’ny biraon’ny lehiben’ny fampanoavana sy ny masoivohon’ny Firenena Mikambana tao afovoan-tanànan’...